Si qurxoon ayey qurxinta gudaha gurigaaga ugu xiran tahay | Abuurista khadka tooska ah
Farshaxanistehan wuxuu ku siideynayaa dhammaan hal-abuurkeeda karantiil gudaha guriga gurigeeda
Ma sahlana in lala kulmo masiibo baahsan oo dhammaanteen gurigeenna keentay. Waana run oo ma ogin sida saxda ah ee loo maareeyo dhibaatooyinka noocan ah ee aynaan ka guuri karin qolka, inkasta oo aan awoodno horseed u noqoshada furitaanka hal-abuurnimada farshaxanyahan loo yaqaan Nathalie Lété.
Lété wuxuu naga reebay inaan la yaabno tayadiisa loogu talagalay gidaarka darbiga. Hagaag, halkii uu darbiyada gurigiisa u qaatay sida shiraac si uu ugu sawiro ubax ahaan sida aad ku arki karto sawiradan la socda maqaalkeena.
Su fikraddii ugu horreysay waxay ahayd in derbiyada oo dhan rinji laga dhigo ka dibna qaado qaababka ubaxyada. Tani waxay ahayd fikraddii ugu horreysay ee ka gudubta maskaxdiisa, maadaama natiijada ugu dambeysa ay ka fog tahay tii asalka ahayd; wax kale oo lagu arko guriga gudihiisa rinji.
Oo hadaan guda galno maxaa waxay haysatay laba bilood inay ku rinjiso wakhti buuxaHagaag, horey ayaan ushaqeynay. Haddii uu ku bilaabay darbiyada, wuxuu ku dhammeeyay laambado, barkimooyin iyo dhammaan walxahaas oo sida caadiga ah ay ku badan yihiin gudaha qolalka gurigeenna.
Sidaad aragtaanba waxba ugama harin rinjiga iyo xitaa marmarka musqusha Waxay qaateen qaabka ubaxa ah waxayna umuuqataa wax kafiican. Ugu yaraan hadda guriga waxaa ka buuxa "nolol." Dhiirrigelinta Nathalie waxay ka timid farshaxanka dhaqanka. Gaar ahaan guryahaas ku yaal Zalipie ee Poland.
Ma uusan ka tagin qolka guriga si uu ugu jajabiyo midabbo iyo codka ubaxa ah ee ah halyeeyga isbadalkan farshaxanimo maxaa ka dhigay joogitaankaaga. Waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la arko haddii xadhiga ka dib uusan siinaynin qaabab kale, maadaama aysan ahayn wax la yaab leh in farshaxanlayaashu ay iyaga siin karaan "wasakh" iyo dhammayn wax ka beddelka wixii ay markii hore ku taamayeen maskaxdooda hal abuur leh.
Tani waa isaga Instagram.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Farshaxanistehan wuxuu ku siideynayaa dhammaan hal-abuurkeeda karantiil gudaha guriga gurigeeda